ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: October 2010
varieties of colorful photos....
ဂူဂယ်လ် ကတော့ အဲဒီလိုဆိုတာပါပဲဗျာ...မယုံယင်တော့ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကြည့် ပါလေ...
ရိုးရိုးဖက်လည်းရပါတယ်ဗျာ...အခုဟာက မောင်ရင်တို့ လုပ်ပုံက သူငယ်ချင်းတောင်မထားရဲဘူး...
ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးသစ်ပင်များလား....
မြွေဆိုးတွေနဲ့ နေနိုင်တဲ့ မင်းသမီးလေးပေါ့ ....
ဘာသာတရား မမေ့ အား...
ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့ နွဲ့ ဝံ့ သူ....
တီထွင်စွမ်းအား ၀ တို့ စွမ်းပကား...
သူကြံယင် ပုလင်းတောင် ထိုင်ခုံဖြစ်ရရှာတယ်...
﻿ခွဲလို့ မရအောင်ချစ်မိကြသူနှစ်ဦးပေါ့ ....
Posted by Unknown | at 12:28 PM |5comments
Angry spirits blamed for schoolgirls fainting
နတ်ကိုင်ယင် ဓါတ်တိုင်တက်ရသလို မူးမေ့ လဲတတ်တယ်...
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကျေးလက်ဒေသမှ ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသူ ၁၀ ဦး
ဟာ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် မူးမေ့ လဲကျသွားခဲ့ ရမှုအပေါ် နတ်များက စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်သဖြင့် ဖမ်း
စားခဲ့၊ နတ်ကိုင်ခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ အဆိုပါကျောင်းသူလေးများ၏ ဆရာ/ ဆရာမများက ပြောဆိုခဲ့ ကြပါ
အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အတွင်းရှိ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မိန်းကလေးများကို ဆေးရုံတွင်ကုသပေးခဲ့ ကြ
ပေမယ့် ဆရာဝန်များအနေဖြင့်တော့ အဘယ်ကြောင့် ယခုကဲ့ သို့ ရောဂါဝေဒနာခံစားခဲ့ ကြရသည်ဆိုတာ
ကိုတော့ မသိရှိနိုင်ခဲ့ ကြပါဘူးလို့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ပနော့ ဗ်ဒေသမှ အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ 
ကျောင်းအုပ် ရို့ စ်လင်မ်ချီ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အားလုံးသောကျောင်းသူလေးများဟာ အစာအဆိပ်သင့် ခြင်းလက္ခဏာများမရှိပဲ ကျန်းမာသန်စွမ်းနေကြပုံ
ရှိနေကြပြီး နှစ်ယောက်သောမိန်းကလေးများကတော့ ဂလူးကို့ စ်ဓါတ်အနည်းငယ် နည်းနေတာပဲရှိပါတယ်
လို့ အဆိုပါကျောင်းအုပ်က ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်တော်တို့ တော့ နတ်ကိုင်ခံခဲ့ ကြရပြီ ( နတ်တွေကြိမ်စာတိုက်တာခံရပြီ ) လို့ စိုးရိမ်နေခဲ့ ကြပါတယ်...
ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ ဒီနစ်ကျောင်းဖွင့် ချိန်မှာ ခါတိုင်းလို နတ်များကို သီချင်းတွေ၊ အကတွေနဲ့ ကန္နား
ပေးပြီးမချော့ ခဲ့ မိကြလို့ ပဲညဖစ်ပါတယ်...
အဲဒီအစား ကျွန်တော်တို့ ဟာ အသီးအနှံတွေ၊ ကြက်သားဟင်းနဲ့ ဝိုင်အရက်တွေကိုပဲ ဒီနေ့ တော့ နတ်တွေ
ကိုပူဇော်ပသခဲ့ ကြပါတယ်... ဒါဆိုနတ်တွေကျေနပ်ပြီး စောင့် ရှောက်ကာကလေးတွေလည်းနေကောင်းလာ
လိမ့် မယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်..." လို့ သူကဆက်ပြီးပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
အရှင်ကြီး၊ အရှင်လေးတွေကို ဒီလိုမချော့ ၊ ကန္နားမပေးလို့ ကိုင်ထည့် လိုက်တာ အားလုံးမူးမေ့ လဲကုန်တယ်
လွန်ခဲ့ သည့် ကြာသပတေးနေ့ ကဖြစ်ခဲ့ သည့် အဖြစ်အပျက်ကို မျက်မြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ ခဲ့ သည့် ကျောင်းဆ
ရာ မီလ်ခင် ကလည်း ၎င်းရဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦးဟာ နံနက်အစောပိုင်းကတည်းက ရင်ဘတ်အောင့် တယ်လို့ 
ပြောဆိုညည်းတွားခဲ့ ပြီး အော့ အံကာ သတိလစ်မေ့ လဲကျသွားခဲ့ တာပါလို့ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
" အခုလို အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ၇ တန်းကျောင်းသူ ၈ ယောက်
၈ တန်းနဲ့၉ တန်းကျောင်းသူ ၂ ယောက် တို့ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဆက်တိုက်မူးမေ့ လဲကျသွားခဲ့ 
ကြတာပါပဲ..." လို့ သူကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ မမြင်ရတဲ့ နတ်၊တစ္ဆေ များကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်လေ့ ရှိကြ
" ဆရာဝန်တွေရော၊ ဆရာ/ ဆရာမများနဲ့ ရဲတွေကပါ ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ အစာအဆိပ်ဖြစ်တာ၊ သာမန်
အားနည်းတာမျိူးတောင် မတွေ့ ခဲ့ ကြတာမို့ ကျွန်တော်တို့ ကတော့ နတ်တွေစိတ်ဆိုးပြီး ပြုစားတာ လို့ ပဲယုံ
ကြည်နေကြပါတယ်..." လို့ ခရိုင်ဒေသအုပ်ချူပ်ရေးမှူး ပက်ဆိုဖီးယာ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
လောကကြီးဟာ ဆန်းကျယ် ဆိုသလိုပါပဲ...တစ်ခါတစ်လေတော့ လည်း ရှင်းပြလို့ မရနိုင်တာတွေဖြစ်တတ်
သို့ သော်လည်း နတ်တွေအနေနဲ့ လူတိုင်းကိုကြီးပွားချမ်းသာအောင်၊ ဒုက္ခဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တာတော့ သေ
အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာအကြောင်းအရာပေါင်းများစွာတိုက်ဆိုင်မှဖြစ်တတ်ပါတယ်...
တောင်ပိုင်နတ်စောင့် ရှောက်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြတဲ့ သာမညတောင်မှာ ဆရာတော်ကြီးရုပ်ကလာပ်ကို
လက်နက်ကိုင်တွေ လုယူသွားတော့ အဲဒီနတ်အနေနဲ့ ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲ ဒီအတိုင်းကြည့် နေခဲ့ ရပုံပေါ်ပါ
ဆရာတော်ကြီးအသက်ထင်ရှားရှိစဉ်ကတော့ လာသမျှလူတွေကို ထမင်းအလကားကြိုက်သလောက်စားနိုင်
အောင် ကူညီနိုင်ခဲ့ တဲ့ နတ်ခမျာလည်း အခုလိုအကြမ်းဖက်သူတွေနဲ့ တွေ့ တော့ လက်မှိုင်ချခဲ့ ရပုံပါပဲ...
နို့ မို့ ဆိုအဲဒီလူတွေအသေဆိုးနဲ့ သေတာတို့ ၊ မချိမဆန့် ဝေဒနာခံစားရတာတွေရှိခဲ့ ယင် လူတွေသိမှာအမှန်
ဘယ်အရာမဆို အစွန်းရောက်တဲ့ အထိ မယုံမိဖို့ အဓိကပါပဲ....
Teachers of 10 teenage girls who collapsed one after another at their rural Cambodian school blamed the mysterious ailment on angry spirits on Saturday. The girls, aged between 14 and 18, were treated in hospital after fainting but doctors could not ascertain why the youngsters were struck down, said Ruos Lim Chhee, head of the high school in Pnov, northern Cambodia.
He said that all of the girls were found to be healthy, with no signs of food poisoning, although two werealittle low on glucose. "We are afraid we are underaspell because we didn't offer any traditional dancing and music to the spirits on the opening day this year," he said. "But we have just offered fruits, boiled chickens and wine to the spirits today, and we hope the students will get better and the spirits will take care of us."
Mil Khim,ateacher who witnessed the string of incidents on Thursday, said one of his students started to complain of chest pains early in the morning and then suffered convulsions before falling unconscious. "The strange phenomenon lasted onlyafew hours, as eight seventh graders and two from eighth and ninth grade fainted subsequently," he said.
Cambodians in rural areas often believe supernatural forces are behind unexplained events. "We think that perhaps the spirits are angry because the doctors, teachers and even police found no trace of poison or physical weakness," said district governor, Pech Sophea.
Posted by Unknown | at 1:19 AM |2comments
Labels: news: smh.com.au
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားများဟာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး မီးရထားလမ်းပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဒေသသုံး ၀ါးရထား...
အခေါ် လော်ရီဟု ဆိုရမည့် ရထားယဉ်ငယ်တစ်မျိူးကို ၀ါးဖြင့် တည်ဆောက်ကာ မြို့ တော်ဖနွမ်းပင်ရဲ့ အ
ကမ္ဘောဒီယားအစိုးရဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ပိုမိုတိုးမြှင့် နိုင်စေဖို့ အတွက်
ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းက ပျက်စီးခဲ့ ရတဲ့ ရထားလမ်းပိုင်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ ပါတယ်...
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ မြို့ တော်ဖနွမ်းပင်နှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ နှင့် 
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဒေါ်လာ၁၄၁ သန်းကုန်ကျမည့် ၆၅၀ ကီလိုမီတာ ( မိုင် ၄၀၀ )အရှည်
ရှိသည့် ရထားလမ်းစီမံကိန်းအတွက် အာရှဖွံ့ ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ဒေါ်လာ ၈၄ သန်းထောက်ပံ့ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့ သည့် သောကြာနေ့ က အဆိုပါ စီမံကိန်းရဲ့ ပထမအဆင့် အဖြစ် ၁၂၀ ကီလိုမီတာ( ၇၅ မိုင် ) ရှည်ပြီး
မြို့ တော်ဖနွမ်းပင်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှ ကန်ပေါ့ ပြည်နယ်၊ တောက်မီးစ် မြို့ ကလေးတို့ သို့ ဆက်
သွယ်ထားသည့် လမ်းပိုင်း ကိုတရားဝင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အဘတို့ သာသိသွားယင်တော့ ဒီလိုမျိူးများလိုက်လုပ်ခိုင်းလေမလားပဲ...
ကိုယ့် အားကိုယ်ကိုး ၀ါးရထား...
မိသားစုတစ်စုတည်းလည်းကိုယ်ပိုင်သုံးလို့ ရတယ်ပေါ့ ...
ရထားမောင်းဖို့ အတွက်ဘာသင်တန်းကျောင်းမှ အောင်စရာမလိုဘူး... ၀ါးတုတ်နဲ့ ထောက်ပြီးမောင်းရုံပဲ...
Cambodians rideabamboo train, known locally asalorry, at new village train station in Pusat province 200 km (124 miles) northwest of Phnom Penh October 19, 2010. Cambodia has reopenedastretch of railway destroyed during the country's war and officials described it asastep towards boosting regional trade through rail links with neighbours. The Asian Development Bank is contributing $84 million toa$141 million project to repair 650 km (400 miles) of railway linking Cambodia's capital, Phnom Penh, to its borders with Thailand and Vietnam by 2013. The first section officially opened on Friday runs 120 km (75 miles) southwest from Phnom Penh to Touk Meas in Kampot province, near the border with Vietnam.
Posted by Unknown | at 12:07 AM |2comments
J-awesome! Man's rubbery kisser is proclaimed the widest in the world
အင်ဂိုလာက ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးပါစပ်ပိုင်ရှင်...
၎င်း၏ပါးစပ်အတွင်းသို့ ကိုကာကိုလာ ဗူးတစ်ဗူး ကန့် လတ်ဖြတ်ထည့် သွင်းပြနိုင်သည့် အမျိူးသားတစ်ဦးကို
ကမ္ဘာ့ အကြယ်ဆုံးပါးစပ်ပိုင်ရှင်၊ သို့ မဟုတ် ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင် အနမ်းပါးစပ်ပိုင်ရှင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ ကြ
ဖရန်စစ်စကို ဒိုမင်ဂိုဂျိူချင် ရဲ့၆.၆၉ လက်မအကျယ်ရှိတဲ့ ရာဘာပါးစပ်ကြောင့် သူဟာ အဆန်းတစ်ကြယ်
ဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ အကြယ်ဆုံး ပါးစပ် ဘွဲ့ ကို ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင် ဂင်းနစ်စ် မှတ်တမ်းအဖွဲ့ ကပေးအပ်ခဲ့ ရပါတယ်...
အင်ဂိုလာရဲ့ အံ့ စရာပါးစပ် လို့ လည်းလူသိများတဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်လူငယ်ဟာ ယခုလအတွင်းက အီတ
လီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့ မှာပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ပါးစပ်အကြီးအကျယ် ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၊ ဆမ်ဘီဇန်ဂါ က ဖရန်စစ်စကို ဒိုမင်ဂို ဂျိူချင် ကတော့ ကမ္ဘာ့ အကြီးကျယ်ဆုံးပါးစပ်
ထိုပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူများဟာ ၎င်းတို့ ရဲ့ ပါးစပ်များအတွင်း ပန်းကန်ပြားများ၊ ကော်ဖီခွက်များ၊ ဘီယာ
ပုလင်းများ ထိုးသွင်းကာအကြီးအကျယ် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ ကြပေမယ့် မည်သူမျှ ဖရန်စစ်စ်ကိုနှင့် ၎င်း၏ ကိုကာကို
လာ ဗူးခွံ ကိုထည့် သွင်းပြနိုင်မှုကိုတော့အနိုင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ ကြပါဘူး...
သူဟာ အင်ဂိုလာနိုင်ငံရဲ့ မြို့ တော် လူအန်ဒါ ရဲ့ လမ်းများပေါ်မှာ နှင့်အီတလီနိုင်ငံကထုတ်လွှင့် တဲ့ ရုပ်မြင်
သံကြားအစီအစဉ်ပြပွဲတစ်ခုမှာ အဆိုပါ ကိုကာကိုလာဗူးကို သူ့ ရဲ့ ပါးစပ်အတွင်း တစ်မိနစ်တွင်းထုတ်ချည်
သွင်းချည် အကြိမ်ပေါင်း ၁၄ ကြိမ် လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ ရာက လူသိထင်ရှားလာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ချီကွင်ဟို လို့ လည်း ခေါ်ကြတဲ့ ဖရန်စစ်စကို နဲ့ သူ့ အစွမ်းအစကို ကမ္ဘာ့ မှတ်တမ်းဂင်းနစ် အဖွဲ့ က ယူကျုက
နေရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ပါးစပ် ....လိုက်ပါပေတယ် ...အဲဒီဘွဲ့ နဲ့ ...
သူ့ အကြောင်းကို နှစ်နှစ်လောက်လေ့ လာရှာဖွေပြီးတော့ မှ အင်ဂိုလာနိုင်ငံက သူ့ ရဲ့ မွေးရပ်မြို့ ကိုခြေရာခံ
ထိုစဉ်ကတည်းက ဖရန်စစ်စကို ဟာ ၎င်းရဲ့ အံ့ မခန်းစွမ်းရည်ပြကွက်ကို အင်တာနက်မှာ ကြည့် ရှုသူပေါင်း
အကြိမ်ပေါင်း ထောင်သောင်းချီပြီးနာမည်ကျော်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ယခုကဲ့ သို့ ဂင်းနစ်စ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ ရတာ ၎င်းအတွက် အိပ်မက်တွေ အမှန်ဖြစ်ခဲ့ ရတာပါလို့ ပြောပြခဲ့ ပါ
A man who can fitawhole can of pop in his mouth sideways has been recognised as havingaworld-record sized kisser.
The 20-year-old, who is also known as the Angolan Jaw of Awe, put his elastic kisser to the test at the the 'Big Mouth' competition in Rome this month.
Posted by Unknown | at 12:03 AM |2comments
Student, 20, named police chief
အသက် ၂၀ အရွယ်ကျောင်းသူက ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်...
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သော မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသောရဲများ...
Police investigating in front of the town hall of Guadalupeat, whereagrenade was detonated, injuring at least 12 people on Oct2(Photo: AP)
အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးဟာ မက္ကစီကိုနိုင်ငံ၏ ဒုစရိုက်မှုခင်းများ ထူပြောသည့် 
မြို့ တစ်မြို့ ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲအဖြစ်ခန့် အပ်ခံခဲ့ ရပါတယ်...
ပြစ်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်အဓိကဖြင့် ကျောင်းတက်နေသည့် ကျောင်းသူ မာရီဆိုးလ် ဗယ်လာ့ စ် တစ်ဦးသာ
ထိုရာထူးကို လက်ခံမည့် သူရှိခဲ့ တယ်လို့ လည်းဆိုပါတယ်...
သူမဟာ မက္ကစီကိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ ဂွါဒါလုပ် နယ်ရဲ့ စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ် လွန်ခဲ့ 
တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ က စတင်ခန့် အပ်ခြင်းခံခဲ့ ရပါတယ်...
သူမတစ်ယောက်တည်းသာ ထိုရာထူးကို လက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် လို့ မြို့ တော်ဝန်ရုံးက အေအက်ဖ်ပီသတင်း
လွန်ခဲ့ သည့် သုံးနှစ်အတွင်း ဂျွာရက်ဇ် နယ်မြေတစ်ခုအတွင်းမှာပင် မူးယစ်ဂိုဏ်းအချင်းချင်း နယ်မြေစား
ကျက်လုသည့် စစ်ပွဲများ၊ တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ လို့လူပေါင်း ၆၅၀၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့ ကြရပါတယ်...
ဂွါဒါလုပ် နယ်တည်ရှိသည့် မက္ကစီကိုနိုင်ငံ၊ ချီဟွာဟွား ပြည်နယ်တွင်လည်း မူးယစ်ဆေးသယ်ဆောင်ဖြန့် ဖြူး
မှုနှင့် ပါတ်သက်သည့် အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိပါတယ်...
ဂွါဒါလုပ် မြို့ တော်ဝန်ဟာလည်း လွန်ခဲ့ သည့် ဇွန်လ ကသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ ရပါတယ်...ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ၊ လုံခြုံရေး
အဖွဲ့ ဝင်များလည်း သေဆုံးခဲ့ ကြရပြီး အချိူ့ ဆိုခေါင်းဖြတ်သတ်ခံကြရတာဖြစ်ပါတယ်....
အဆိုပါ ဂွါဒါလုပ် မြို့ မှာတင် လွန်ခဲ့ သည့် တစ်ပါတ်အတွင်း လူသတ်မှု ၈ မှုဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်...
မက္ကစီကို အစိုးရအနေဖြင့် လွန်ခဲ့ သည့်၂၀၀၆ ခုနှစ်ကစပြီး မူးယစ်မှောင်ခိုဂိုဏ်းများကို အမြစ်ပြတ်နှိမ်နင်း
ရေး စီမံချက်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပြီးနောက် ထိုမူးယစ်ဂိုဏ်းများနှင့် ပါတ်သက်သည့် အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် 
သေဆုံးခဲ့ ရသူပေါင်း ၂၈၀၀၀ ကျော်သွားခဲ့ ပြီဖြစ်ပါတယ်...
A 20-year-old student has been named the new police chief ofaviolence-torn town in Mexico.
Marisol Valles, who major in criminology, appeared to be the only one to accept the position.
She becomes the director of municipal public security of Guadalupe in northern Mexico since Oct 18.
"Since she was the only person to accept the position," the mayor's office told AFP.
The ongoing turf battles between rival drug gangs have claimed some 6,500 lives in Juarez alone over the past three years.
Chihuahua, the Mexican state in which Guadalupe is located, has suffered from the drug cartel-related violence.
The mayor of Guadalupe was murdered in June.
Police officers and security agents have been killed, with some of them being beheaded.
There were at least eight murders last week alone in Guadalupe.
More than 28,000 people have died throughout Mexico in suspected drug violence since the Mexican government launched an all-out war against drug cartels in 2006.
Posted by Unknown | at 9:09 AM |0comments
One man and two brides in 24 hours
ပထမမြောက် မင်္ဂလာပွဲတွင်တွေ့ ရသည့် သတို့ သားနှင့် ဆွေမျိူးများ...
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိူးသားတစ်ဦးဟာ ၎င်းချစ်မြတ်နိုးသည့်အမျိူးသမီးနှင့်၊ ၎င်း
၏မိဘဆွေမျိူးများမှ သဘောတူကာလက်ထပ်ရန်စီစဉ်ပေးသည့် အမျိူးသမီး နှစ်ဦးတို့ အကြား မည်သူ့ ကို
ယူကာ မင်္ဂလာဆောင်ရမည့် အရေးဗျာများနေရမှုကို ဖြေရှင်းသည့် အနေဖြင့် ထိုအမျိူးသမီးနှစ်ဦးစလုံးကို
၂၄ နာရီအတွင်း ဆက်တိုက်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းလိုက်သဖြင့်ပါကစ္စတန်တစ်နိုင်ငံ
လုံး ( အထူးသဖြင့် အမျိူးသားထုကြီးကပေါ့ ဗျာ...) ရဲ့ အာရုံစိုက်၊ စိတ်ဝင်စားမှုကို ခံခဲ့ ရပါတယ်...
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ အမျိူးသားများဇနီးမယားတစ်ယောက်ထက် ပိုယူခြင်းကို ခွင့် ပြုထားပေမယ့် 
အများအားဖြင့် တော့ ၎င်းတို့ ဟာ ပထမဇနီးသည်နှင့် အိမ်ထောင်ပြုပြီး နှစ်အတန်ကြာမှ ထိုဇနီးဖြစ်သူရဲ့ ခွင့်
ပြုချက်ရယူပြီး ( အမှန်တော့ ခွင့် မပြုလည်း အတင်းယူမှာပါပဲ...) ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံလက်ထပ်ကာအိမ်
အဇာဟိုက်ဒရီ အမည်ရှိအဆိုပါအမျိူးသားဟာ ပထမတော့ မိဘဆွေမျိူးများ သဘောတူညီမှုဖြင့် ငယ်စဉ်
ကလေးဘ၀ကတည်းက လက်ထပ်ရန်စေ့ စပ်ထားခဲ့ သည့် အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ဟူမိုင်ရာကဆင် အ
သို့ မှသာ ၎င်းအနေနှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ရသည့် အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ရူမနအဆလမ် လေးကိုလက်ထပ်နိုင်
သို့ သော်ထိုသို့ ဆုံးဖြတ်ပါက ၎င်း၏ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ဓလေ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာကဲ့ သို့ ဖြစ်နေသော မိဘ
များကစီစဉ်ပေးသည့် မင်္ဂလာပွဲ ပျက်ပြားခဲ့ ပါက မိသားစုများလည်း စိတ်ဝမ်းကွဲကာ ခွဲခွာနေကြရမည်အထိ
သူ့ ကိုမှ အတူတူချစ်ခဲ့ မိလေသမို့ ညီအစ်မရင်းသဖွယ်၊ သူငယ်ချင်းလိုတစ်သွယ် နေပါ့ မယ်
လို့ ဆိုတဲ့ သတို့ သမီး နှစ်ယောက်...
Brides Humaira Qasim, (centre right rear) and Rumana Aslam, (left rear) sit during the ceremony on Sunday as girls sing songs during the wedding ceremony between bride Humaira and groom Azhar Haidri who is unseen in this AP photo
" ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က နှစ်ယောက်စလုံးကို လက်ထပ်ယူဖို့ အဖြေပေး ကမ်းလှမ်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်..
အမျိူးသမီး နှစ်ဦးစလုံးကလည်း အဲဒီအဆိုပြုချကို သဘောတူခဲ့ ကြပါတယ်..." လို့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အလယ်
ပိုင်းဒသက မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်သည့် မူလ်တန်မြို့ တွင် လွန်ခဲ့ သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ က ကျင်းပခဲ့ သည့် သတိုးသမီး
ဟူမိုင်ရာနှင့်လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင် ဟိုင်ဒရီက သတင်းဌာနကိုပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
သူဟာ ရူမနာ ကို တနင်္လာနေ့ မှာ ဆက်ပြီးလက်ထပ်မှာဖြစ်ပါတယ်...
ယခုလိုထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ အခြေအနေနှင့် ပြုလုပ်မယ့် မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲ အခမ်းအနားများကို ပါကစ္စတန်
နိုင်ငံ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများမှ ထုတ်လွှင့် ပေးသွားဖို့ လည်း စီစဉ်ထားကြပါတယ်...
အမျိူးသမီးနှစ်ဦးစလုံးကလည်း ယခုကဲ့ သို့ ( ခင်ပွန်းသည်တစ်ဦးတည်းကို ) လက်ထပ်မယ့် အပေးအယူ၊ သ
ဘောတူညီမှုဟာ သင့် မြတ်ကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ နှစ်ဦးအနေနှင့် ညီအစ်မများလို၊ သူငယ်
ချင်းတွေလို နေထိုင်သွားကြဖို့ သဘောတူခဲ့ ကြပါတယ်....
" ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်စလုံး သူ့ တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်နေမိကြတဲ့ အပေါ် ကျွန်မကတော့ ဝမ်းသာမိ
ပါတယ်..." လို့ ရူမနာ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
ဖိုးကံကောင်း ဟိုင်ဒရီ ဟာ တိုင်းရင်းဆေးဆရာအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူဖြစ်ပြီး သူ့ ကိုယ်သူ
တော့ အလွန်ကံကောင်းတဲ့ သူအဖြစ် ယုံကြည်နေပါတယ်... ( ဟုတ်တာပေါ့ ကိုယ့် လူရယ်...)
" အမျိူးသမီးနှစ်ယောက်စလုံးက ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စွာ ခင်ပွန်းတစ်ယောက်တည်းကို လက်ထပ်ကြဖို့ သဘော
တူတာကတော့ တစ်ကယ့် ကို ရှားပါတယ်ဗျာ..." လို့ သူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
သူများသားသမီးတွေများ ကံကောင်းချက်ကတော့ ....
ချစ်ဆွေကြီး ဘကြီးမိုးလည်း အဲဒီလိုများကံမကောင်းချင်ဘူးလားဗျာ...
Pakistani law allows polygamy. But men who take multiple wives usually do so years apart and must get approval from their first wife prior toasecond marriage.
Azhar Haidri initially refused to mar ry 28-year-old Humaira Qasim -the woman to whom he has been engaged since childhood -because he wanted to marry the woman with whom he had fallen in love, 21-year-old Rumana Aslam.
But the decision threatened to split his family apart since arranged marriages are often customary in Paki stan.
"I gave this offer that I will marry both of them," Haidri told the news agency ahead of his first marriage to Humaira on Sunday in the central Pakistani city of Multan. "Both the girls agreed."
He is scheduled to marry Rumana on Monday (today).
"I am happy that we both love the same man," Rumana said.
Haidri -an herbal medicine practi tioner -counts himself lucky.
"It is also very rare that two women are happily agreeing to marry one man," he said. -AP
Monkeys appointed station masters in Japan
No more monkeying around! Nehime and Rakan on the job
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မျောက်ကလေးနှစ်ကောင်ကို ဘူတာရုံတစ်ခု၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် ရုံပိုင်များအဖြင့် ခန့် အပ်ခဲ့ 
နီဟီမီ နှင့် ရကန် အမည်ရှိကြတဲ့ အဆိုပါမျောက်ကလေးများဟာ ဟရိုဂိုပြည်နယ်ရှိ ဟိုဂျိူမာချီ ဘူတာရုံတွင်
မီးရထားလာရောက်စီးနင်းသူများ ပိုမိုများပြားလာအောင် ဆွဲဆောင်သည့် အနေဖြင့် စတင်ကာ တာဝန်ထမ်း
အသက် ၇ လနှင့်၃ လ အသီးသီးရှိကြပြီဖြစ်တဲ့ မျောက်ကလေးများကို ဦးထုပ်အသေးလေးတွေဆောင်းပေး
ထားပြီး အပြာရောင်ယူနီဖောင်းဝတ်စုံကိုလည်း ၀တ်ဆင်ပေးထားပါတယ်...
၎င်းတို့ ကိုဘူတာရုံပိုင်အဖြစ်ရော၊ မြို့ ကလေးရဲ့ အထူးမြို့ သားအဖြစ် မြို့ တော်ဝန်မှ ခန့် အပ်လိုက်ခဲ့ ပြီး
နောက် ဟိုဂျိူ - ချိူ ရထားလမ်းကြောင်းပေါ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ထိုဘူတာရုံမှာ အလုပ်ဝင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်...
ထိုမျောက်ကလေးများကို ဒေသခံမြို့ သားတစ်ဦးကပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီး အရုံးပေါ်နေသည့် မီးရထားလုပ်ငန်းကို
ပြန်လည်ဦးမော့ လာစေဖို့ အဆိုပြု စီစဉ်ပေးခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ မီနီချီ သတင်းစာက ဆိုပါတယ်...
ယခင်ကလည်း တာမာ အမည်ရှိတဲ့ ကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ဟာ ကီရှီ ဘူတာရုံမှာ ရုံပိုင်အဖြစ်တာဝန်
ပေးခန့် အပ်ခန့် လို့ နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ ပါသေးတယ်...
Two baby monkeys have been appointed honorary station masters ofaJapanese railway station.
The monkeys, aged seven months and three months, are dressed in blue uniforms complete with mini hats.
They were formally appointed station masters and “special city residents” by the local mayor and now go on duty at the station located on the Hojo-cho line.
The monkeys belong toalocal who proposed the arrangement to help revive the fortunes of the financially troubled railway line, according to the Mainichi newspaper.
Elsewhere, Tama,atortoiseshell cat, is famous in Japan asalongstanding station master of Kishi station.
Posted by Unknown | at 8:49 AM |0comments
Labels: news: Mumbai Mirror
ဒီလိုတော့ ဖြင့် မ၀တ်နဲ့ ကွယ်... စိတ်လှုပ်ရှားရတယ်...
စာရိတ္တမဏ္ဍိုင်ကြံ့ ခိုင်ရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်သည့် အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် အနေဖြင့် အီတလီ
နိုင်ငံမှ မြို့ ငယ်လေးတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူ အာဏာပိုင်များသည် တိုလွန်းသည့် မီနီစကတ်များ၊ ရင်သားများ
အား အလွန်ဖော်ပြရာရောက်သည့် လည်ဟိုက်အင်္ကျီများဝတ်ဆင်ထားသည့် အမျိူးသမီးများအား ဒါဏ်ငွေ
ပေးဆောင်စေဖို့ လွန်ခဲ့ သည့် သောကြာနေ့ က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါတယ်...
ထိုသို့ တစ်ကယ်ပြတဲ့ သူငယ်မ များအနေနှင့် ဒါဏ်ငွေ ယူရို ၅၀၀ ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ အဆိုပါမြို့ 
ငယ်လေးမှာ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဥပဒေစည်းကမ်း အသစ်က ဆိုပါတယ်လို့ တယ်လီဂရပ်နေ့ စဉ်သတင်းစာ
နာမည်ကျော်မင်းသမီးများဖြစ်ကြသည့် မိုနီကာ ဘယ်လုစီ၊ ဆိုဖီယာလောရင့် တို့ ကဲ့ သို့ ဆွဲဆောင်မှုညို့ အားပြင်းသည့် မင်းသမီးများ ပေါ်ထွက်ခဲ့ သည့် နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် ထူးဆန်းအံ့ သြဖွယ်ရာဖြစ်နိုင်လောက်
သည့် အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် ဖော်ချွတ်ပြသမှုသဘောသက်ရောက်နိုင်သည့် အ၀တ်အစားများဝတ်ဆင်
ခြင်းကို နေပယ်လ်မြို့ အနီးရှိ ကက်စတလ်လမ်မာရီဒီ စတာဘီယာ မြို့ ကလေးတွင် တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ ခြင်း
မြို့ နယ်အုပ်ချူပ်ရေးကောင်စီအနေနှင့် အမျိူးသားများနှင့် အမျိူးသမီးများပါ ဂျင်းဘောင်းဘီအတိုများကိုဝတ်
ဆင်ခြင်းများကိုလည်းတားမြစ်ထားသည့် ( နိုင်ငံသားကောင်း ) မြို့ နယ်သားကောင်း၊ သမီးကောင်းတိုင်းမ
ဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းအသစ် ၄၁ ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်ဟု သတင်းဖော်ပြချက်ကဆိုပါတယ်...
မြို့ ကလေး၏မြို့ တော်ဝန် လူအီဂီဘော့ ဘီယို က ယခုစည်းကမ်းများဟာ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းသောသူများ၊
စည်းကမ်းမဲ့ သူများ၊ အနေအထိုင်ကြမ်းတမ်းကာဟီရိသြတပ္ပမရှိသူများ ကိုသာရည်ရွယ်သည့် မြို့ ကြီးသားပီ
သ စေရနှင့် အေးချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြရန် ရည်ရယ်သည့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်ကြောင်းပြော
လာမည့်တနင်္လာနေ့ တွင်ကျင်းပမည့် မြို့ တော်ကောင်စီ အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုရန်တင်ပြမည့် ယခုပြ
ဌာန်းခဲ့သည်စည်းမျဉ်းများအရ ပန်းခြံ၊ဥယျာဉ်များတွင်ဘောလုံးကစားခြင်းနှင့် အများပြည်သူမြင်ကွင်းတွင်
လူ့ ကျင့် ဝတ်ပီသစေချင်သည့်မြို့ တော်ဝန်ကြီး....Mayor Luigi Bobbio
ယခုတင်ပြခဲ့ သည့် စည်းကမ်းဥပဒေများသာ အတည်ပြုခဲ့ ပါက စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူများအ
နေဖြင့် ဒါဏ်ငွေ ၂၅ယူရိုမှ ၅၀၀ ယူရိုအထိ ပေးဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်...
၀န်ကြီးချူပ် ဆီလ်ဗီယို ဘာလုစ်ကိုနီဦးဆောင်သည့် အစိုးရအာဏာရခဲ့ ပြီးနောက် မြို့ နယ်၊ပြည်နယ်အုပ်ချူပ်
မှုကောင်စီများအား မှုခင်းများ၊ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းနှင့် ဖီလာဆန့် ကျင်ဖြစ်သည့် အပြုအမူများအား ဖြေရှင်း
ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အခွင့်အာဏာများပိုမိုအပ်နှင့် ခဲ့ ပြီးနောက် ၂ နှစ်အတွင်း အီတလီနိုင်ငံအတွင်း ယခုကဲ့ 
သို့ သော ဥပဒေ၊ စည်းကမ်းများအမျိူးမျိူးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ ရပါတယ်....
လွတ်လပ်စွာပြောဆို၊နေထိုင်ခွင့် ရှိရမယ်ဆိုပေမယ့် လည်း မိမိကြောင့် တစ်ပါးသူများမှာ စိတ်မိုက်စိတ်ရိုင်း
တွေဝင်လာစေနိုင်တဲ့ လျှိူ့ ဝှက်အပ်တဲ့ အင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဖော်ပြတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများကိုတော့ တားဆီး
ဒါပေမယ့် တစ်ကိုယ်လုံးခေါင်းမြီးပါခြုံစေတာကတော့ မလိုအပ်လှပါဘူး...
Inamove that appears to be an act of moral policing, authorities inasmall Italian town have decided to fine women who wear miniskirts or show too much cleavage,amedia report said here Friday.
The fair sex will face fines of up to 500 Euros (RM 2,174) under new rules to be introduced in an Italian town, the Daily Telegraph reported.
The town's council also wants to ban men and women from wearing low-slung jeans as part ofalist of 41 new rules that "every good citizen must respect", the report said.
Luigi Bobbio, the mayor, said it was all part of an effort to "restore urban decorum and improve coexistence" by targeting people who were "rowdy, unruly or simply badly behaved".
Playing football in parks and gardens and swearing in public will also be banned under new regulations which will be put forward for approval atacouncil meeting Monday.
If the new regulations are approved, offenders will face fines of between 25 Euros (RM108.70) and 500 Euros (2,714).
Italy has become entangled inaweb of petty rules and regulations in the last two years after the government of Silvio Berlusconi gave councils extra powers to tailor laws to tackle crime and anti-social behaviour.
Published Oct 23 2010
Posted by Unknown | at 4:59 AM |4comments
Labels: news: IANS
၎င်း၏နောက်ခြေနှစ်ချောင်းဖြင့် သာ မတ်တပ်ရပ်လျှက်လမ်းလျှောက်သွားလာနေတတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်နေ
သည့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ခွေးတစ်ကောင်ဟာ ၎င်းနေထိုင်ရာအရပ်ဒေသမှာတော့ နာမည်ကျော်ကြားလျှက်ရှိပါ
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟေနန်ပြည်နယ်၊ ကျူမာဒီယန်အရပ်မှ ၁၈ လသားအရါယ်ခွေးကလေး၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ကျိူဂွမ်
ရှန် ကသူ၏ခွေးကို နောက်ခြေထောက်ဖြင့် သာလမ်းလျှောက်တတ်အောင် ရှေ့ လက်ကိုလိုက်မြှောက်ပြီးသင်
ပေးခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
" ခွေးကလေး လုလု ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လက်ဆောင်ပေးခဲ့ တာဖြစ်ပြီး သူ့ ကိုမြင်မြင်ချင်းကျွန်
တော်တို့ ချစ်သွားကြပါတယ်...သူဟာလေးလသားကတည်းက နောက်ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ ပဲလမ်းလျှောက်ဖို့ 
လေ့ ကျင့် တတ်မြောက်ခဲ့ ပြီး အဲဒီကတည်းကစပြီး မရပ်မနားကို မတ်တပ်ရပ်ပြီးလျှောက်တော့ တာပါပဲ..."
လို့ ကျိူ ကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
အငြိမ်းစားကျောင်းဆ၇ာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကျိူ က အခုဆိုယင် လုလုဟာ တစ်ချိန်လုံးနီးပါး သူ့ ရဲ့ နောက်ခြေ
ထောက်ပေါ်မှာပဲ ထောက်ပြီး မတ်တပ်ရပ်နေတော့ တာပါပဲ လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ခွေးကလေးဟာ နားနေတာတောင်မှ သူ့ ရဲ့ နောက်ခြေနှစ်ချောင်းပေါ်မှာဆောင့် ကြောင့် ထိုင်ပြီး သူ့ ရဲ့ ခန္ဓာ
ကိုယ်ကို မတ်မတ်ထားကာ ရှေ့ ခြေနှစ်ချောင်းကို မြှောက်ထားတတ်ပါသေးတယ်...
စောစောအိပ်လို့ စောစောထလို့ ...စောစောလမ်းလျှောက်ကြပါစို့ ....
နံနက်တိုင်း ကျိူ ဟာ ခွေးကလေးလုလုကို အနီးအနားမှ ရာစုနှစ် ပန်းခြံကို လမ်းလျှောက်သွားဖို့ ခေါ်သွား
လေ့ ရှိတာမို့နံနက်ခင်းပန်းခြံကိုလမ်းလျှောက်လာသူများအကြားမှာ ရေပန်းစားနေပြီး တွေ့ မြင်သူတိုင်းက
သူ့ ကိုချစ်ကြပြီး ခွေးကလေးဖို့ စားစရာတွေယူလာတတ်ကြပါတယ်...
ထူးပါပေ့ ဆန်းပါပေ့ ဗျာ...
"Lu Lu was given to us byafriend and we loved him instantly," he said. "He learnt to walk upright when he was just four months old, and hasn't stopped ever since then."
Posted by Unknown | at 6:39 AM |0comments
Indonesia seeks jail for Muslim cleric who 'married' girl, 12
ဆင်းရဲတွင်းထဲကသမီးကို ကယ်တင်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက ဦးဦးဗလီဆရာ...
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ တရားဥပဒေပညာရှင်များက အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မျှသာရှိသေးသည့် မိန်းကလေးငယ်
တစ်ဦးအား တရားမ၀င်ဇနီးမယားအဖြစ် ယူထားသည့် ကြွယ်ဝချမ်းသာသော မွတ်ဆလင်ဘာသာတရား
ဟောဗလီဆရာတစ်ဦးကို အရွယ်မရောက်သေးသူကလေးသူငယ်အား လိင်မှုဆိုင်ရာမတော်မတရားနှိပ်စက်
အလွဲသုံးစားပြုမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးကာ ထောင်ဒါဏ်ခြောက်နှစ်အပြစ်ပေးဖို့ လွန်ခဲ့ သည့် ကြာသပတေးနေ့ က
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာဗားအလယ်ပိုင်းဒေသမှ ဆီမာရန်မြို့ ကလေးမှ အသက် ၄၅ နှစ်ရှိ ပူဂျီယိုနိုကယိုဝီဒီယန်
တို ဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးရှာသည့် ကျေးတောသူလေး လုဖီယာနာအူလ်ဖာ ကိုလက်ထပ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ တဲ့ အ
တွက် နိုင်ငံအ၀ှမ်းတွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်မတို့ ကတော့ သူ့ ကို ထောင်ဒါဏ်ခြောက်နှစ်အပြစ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြုထားပါတယ်...သူဟာ
အမျိူးသမီးများ၊ အထူးသဖြင့် အသက်အရွယ်မရောက်သေးသည့် ယခုကလေးမကလေးကို လိင်မှုဆိုင်ရာ
မတော်မတရားပြုခဲ့ တယ်ဆိုတာ ဥပဒေကြောင်းအရ သက်သေပြပြီးဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ်..." လို့ တရား
ရုံးဥပဒေပညာရှင် ( အစိုးရရှေ့ နေ ) ဆူနင်ဆီ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျောင်းတစ်ခုရဲ့ အကြီးအကဲ၊ အုပ်ချူပ်သူအနေနဲ့ သူဟာ စံပြ၊ နမူနာကောင်းတစ်ဦး
မဖြစ်ခဲ့ ပါဘူး..." လို့ လည်း သူမကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
ကြည့် ကျက်လည်းလုပ်ပါ ဆရာရယ်....
ရှိတ်ပူဂျီ လို့ လည်းအမည်ရှိတဲ့ ဝီဒီယန်တိုဟာ အူလ်ဖာ လေးကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် သြဂုတ် လမှာလက်ထပ်ခဲ့ 
တာဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးဟာ အရွယ်ရောက်နေခဲ့ ပါပြီလို့ ပြောကြားယင်းတရားမ၀င်ဖြစ်တဲ့ ၎င်း၏ ဒုတိယ
မြောက်ဇနီးမယားထပ်ယူခြင်းကို ကာကွယ်ချေပခဲ့ ပါတယ်...
၎င်း၏လုပ်ရပ်ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာအဆုံးအမအရ လက်ခံနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ လည်း ၀ီဒီယန်တို က ယခင်
ကတည်းကပြောကြားခဲ့ ပေမယ့်၎င်းအနေနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားနိုင်သည့် အမျိူးသမီးဟာ အနည်းဆုံးအ
သက် ၁၆ နှစ်ပြည်ပြီးဖြစ်ရမည်ဟု ဆိုသည့် နိုင်ငံတော်ရဲ့ တရားဥပဒေကို လိုက်နာသင့် တယ်လို့ ဝေဖန်ကန့် 
ကွက်သူများက ပြောကြားခဲ့ ကြပါတယ်...
အရွယ်မရောက်သူများအား လိင်မှုဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခြင်း၊ မတော်မတရားပြုမူခြင်းများအတွက် အင်ဒိုနီး
ရှားနိုင်ငံတွင် ပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးနိုင်သည့် ဥပဒေများပြဌာန်းထားသော်လည်း တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ကာ
လက်ထပ်ခြင်းမဟုတ်ပဲ ရိုးရာဓလေ့ အရ လက်ထပ်သည့် အသက်အရွယ်ကြီးမားသည့် အမျိူးသားများနှင့် 
အရွယ်မရောက်သေးသူ မိန်းကလေးငယ်များ လက်ထပ်ထမ်းမြားခြင်းဟာ ကျေးလက်တောရွာဒေသများတွင်
Indonesian prosecutors on Thursday demandedawealthy Muslim cleric who tooka12-year-old girl as his unofficial wife be convicted of sexually abusingachild and given six years in prison. Pujiono Cahyo Widiyanto, 45, from the Central Java city of Semarang, sparked nationwide controversy over his decision to marry poor village girl Lutfiana Ulfa.
"We recommend six years prison for him. He has been proven legally as being sexually abusive towards women, especially towards this underage person," prosecutor Suningsih, who goes by one name, said. "As the owner ofareligious school he doesn't setagood example," she said.
Widiyanto, also known as Sheikh Puji, married Ulfa in August 2008. He had defended the unofficial marriage, his second, saying that the girl had reached puberty.
Widiyanto previously said his actions were acceptable under Islam but critics said he should abide by state law, which sets 16 as the minimum age for marriage. Indonesian law has harsh penalties for pedophilia, but unregistered and therefore unofficial marriages between older men and under-age girls are common in rural areas.
Posted by Unknown | at 6:00 AM |2comments
အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဟာ စကားလုံးပေါင်းမြောက်များစွာကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုလေတာမို့ အခု
လောလောဆယ်နေသိပ်မကောင်းလို့ စာမရေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိူးမှာဘလော့ဂ်ကြွလာပ၇ိတ်သတ်များ
အပျင်းပြေစေ၊ အတွေးရစေဖို့အင်တာနက်က တွေ့ မိသမျှ ၊ တစ်ချိူ့ လည်း ဖော်ဝါ့ ဒ်မေးကရတဲ့ ပုံလေး
ကိုယ့် ဒုက္ခကိုယ်ရှာတဲ့ သူတွေပဲ...ဒီလိုစားယင်ရရဲ့ သားနဲ့ ဗျာ...
ပရာဒိုတို့ ဆာ့ဖ် တို့ နဲ့မော်ဒန် အမဲလိုက်နည်းပေါ့ ဗျာ...
အံမယ်....သူတို့ ကလည်း ရေသဘင်နဲ့ ခင်ဗျ... ( ရေဘင်မျက်မှန်ကိုဆိုလိုသည်...)
တစ်ခါတစ်လေတော့ လည်း ဒီလိုအပူအပင်ကင်းကင်းနဲ့ နေချင်သား...( ပြုတ်တော့မကျစေနဲ့ ပေါ့ ဗျာ...)
သူ့ အရပ်နဲ့ သူ့ ဇတ်တော့ ဟုတ်နေတာပါပဲ...ဘယ်သူမှ ဆန္ဒပြကန့် ကွက်တယ်လို့ လည်းမကြားမိပါဘူး
အကောင်လိုက်မြိုလိုက်မယ် ....ပုံစံဆန်းနဲ့ ရေခဲချောင်း...
ပစ်မှတ်တို့ အားလုံးရဲ့ ဆုံချက်....
ခွေးနဲ့ ကျားသစ် အလွန်ချစ် သတဲ့ ....
အမေရိကန်ဟာ အဲဒီနေရာတွေမှာ ကမ္ဘာ့ ထိပ်ဆုံး နံပါတ် ၁ ပါပဲ....
Posted by Unknown | at 1:39 AM |2comments
Whisper foracause
ကီဗင်ရစ်ချတ်ဆန် သို့ မဟုတ် ခြင်္သေ့ များကို တီးတိုးစကားဆိုသူ လို့ လူသိများတဲ့ သားရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ချစ်သူ
ဟာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ဂျိူဟန်နတ်စ်ဘာ့ ဂ် မြို့ အနီးက ဘရိုဒါစထရွန်း ခြင်္သေ့ ဖြူများရဲ့ ဥယျာဉ်မှာ ခြ
င်္သေ့ တွေနှင့် အတူ ဖက်လှဲတစ်ကင်း နပမ်းသတ်ကာဆော့ ကစားလေ့ ရှိနေတတ်ပါတယ်...
အသက် ၃၄ နှစ်ရှိ အမျိူးသားဟာ ဂျိူဟန်နတ်စ်ဘာ့ ဂ် မြို့ အနီးက သဘာဝတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်း
စောင့် ရှောက်ရေးဥယျာဉ်ပန်းခြံကို တည်ထောင်ဖွင့် လှစ်ထားပြီး ချီတာကျားများ၊ ကျားသစ်များနှင့်ခွေးအ
များကိုပါ ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ထားပါတယ်...
တောဘုရင်ကို မြင်းလုပ်လို့ ကျောပိုးစီးနိုင်တာ မေတ္တာတရား၊ အသိအမှတ်ပြုလေးစားမှုတွေကြောင့် ပါ...
နူးညံ့ တဲ့ မေတ္တာတရားကြောင့် ....သံယောဇဉ်တောင်ဖြစ်နေပါပြီ....
သူဟာ တိရိစ္ဆာန်များကို မေတ္တာ၊ အသိအမှတ်ပြုမှု၊ လေးစားမှုတို့ ဖြင့် ဆက်ဆံကာ ပြောဆိုလေ့ ကျင့် ထိန်း
ကျောင်းပြီး ၎င်းတို့ သူတို့ ၏ ( တိရိစ္ဆာန်တို့ ၏ ) လေးစားဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ မိတ်ဆွေအဖြစ် ရောက်အောင်နေ
ထိုင်လေ့ ကျင့် ပေးခဲ့ ပါတယ်...
တစ်ဦးမေတ္တာ တစ်ဦးမှာ ကူးကာဆက်စပ် တုံ့ ပြန်ပါသည်....
ယခုပုံများ၊ ဗီဒီယိုတို့ ကြောင့် အာဖရိကမှာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့် သည်များအနေနှင့် ခြင်္သေ့ တစ်
ကောင်ကိုပစ်ခတ်နိုင်ဖို့ ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀ ပေးလျှင်ရသည့် အလေ့ အကျင့် ကို ပယ်ရှားဖို့ ဆောင်ရွက်နိုင်
လိမ့် မည်ဟု သူကမျှော်လင့် နေပါတယ်....
Kevin Richardson, a.k.a. the Lion Whisperer plays and wrestles with lions at their enclosure at the Kingdom of the White Lion park in Broederstroom, near Johannesburg, South Africa. Kevin Richardson has raised his voice against the legal killing of lions in the country throughamovie which is to open in the United States on Friday.
He hopes the film will help discourage the practice atatime when foreign tourists are willing to pay up to $40,000 to shootabig cat.
ကမ္ဘာ့ အရပ်အမြင့် ဆုံး ရွှေအိုရောင်ဆံရှင်မလေး...
အသက် ၂၃ နှစ်ရှိ ရွှေရောင်ဆံပင်နဲ့ အမျိူးသမီးကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသာမက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရပ်အ
မြင့် ဆုံးအမျိူးသမီးတွေထဲက တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်...
လင်းဆေးဟေးဝါ့ ဒ် လို့ အမည်ရှိတဲ့ သူမဟာ အရပ် ၆ပေ ၉ လက်မ ရှိပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကလည်း ပေါင်
သူ့ အရပ်နဲ့ သူ့ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ကတော့ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ကို ကိုင်ပေါက်ပြီး လွှင့် မပစ်ခင် အသာလေး
လင်းဆေးရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့သူမကို ပေါင်ချိန် ၅၀၀ လောက်လေးတဲ့ ပြိုင်ဘက်နပမ်းသမားကြီး
ကိုခြေထောက်နဲ့ ဆွဲလှဲနိုင်တဲ့တစ်ကယ့် နပမ်းသမ အိုင်စစ် အဖြစ်နဲ့ သိကြပါတယ်...
လင်းဆေး အသက် ၉ နှစ်မှာပဲ သူမ အရပ် ၆ ပေရှိနေခဲ့ ပြီး အသက် ၁၃ နှစ်မှာတော့ ယခုလက်ရှိအရပ်ဖြစ်
တဲ့၆ ပေနဲ့ ၉ လက်မ ရှိနေခဲ့ ပါပြီ...
လွန်ခဲ့ တဲ့ စက်တင်ဘာလမှာတော့ သူမရဲ့ အစ်ကိုကာလသများအကြိုက် မလုံ့ တလုံ့ ရင်သိမ့် တုန် ဓါတ်ပုံ
တွေ အင်တာနက်မှာ ထွက်ပေါ်ပျံ့ နှံ့ ခဲ့ လို့ သူမအနေနှင့် နပမ်းရှိုးပွဲတွေကနေ အနားယူခဲ့ ရပါတယ်...
သူမရဲ့ ချောမောလှပဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ရင်သားဆိုဒ် 36G ရှိတာတောင်မှ လင်းဆေး ခမျာအချစ်
အသက် ၁၁ နှစ်တုံးက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တူတူ...
ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ကို ဒီလို အသာလေးကိုင်ပေါက်နိုင်တာမို့ ...
သူနဲ့ များ စကားများရန်ဖြစ်မိလို့ ကတော့ ....မလွယ်...
အမေရိကားရောက် ကိုကြီးကျောက်နဲ့ များလား....
ကိုပီတာနဲ့ ဆိုယင် ဒီလောက်တောင်ရှိနိုင်ပါ့ မလားပဲ....
သာမန် အမျိူးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ယှဉ်လိုက်ယင် ....ဆင်နဲ့ ဆိတ်လို ကွာပါတယ်...
ကားတစ်စီးကိုတောင် လက်တစ်ဖက်နဲ့ အသာလေးမနိုင်တယ်ဆိုတော့....
ကိုယ်တွေလောက်တော့ ....စာဖွဲ့ မနေလောက်ဖူးပေါ့...
အထုပ်အထည်နဲ့ .....ဟုတ်တယ်ဗျိူ့ ...
ပုဝါမကူ ရေမရှူစတမ်း ...ရေကုန်ရေခမ်း ထိုးမယ်ပေါ့ ...
ဒီပုံနဲ့ သာ facebook မှာတင်လိုက်လို့ ကတော့ ကြွေသွားကြမှာ အသေအချာပါပဲ....
This 23-year-old blonde is one of the tallest women in the USA and in the world. Lindsay Hayward is 6’9″ tall. Her weight is 240 pounds. She can easily spinaman over her head before throwing him across the room.
Lindsay’s fans know her as professional wrestler Isis who can leg press an astonishing 50st. At the age of 9, Lindsay was 6ft tall, and by 13 years old she had shot to 6ft 9ins, her today’s height.
In September she has been dropped from the show after erotic photos of her surfaced on the Internet.
Still, despite her attractive looks and 38G bra size, Lindsay has so far been unlucky in love. Would you date her?
Posted by Unknown | at 1:18 AM | 1 comments
J-awesome! Man's rubbery kisser is proclaimed the ...
Indonesia seeks jail for Muslim cleric who 'marrie...
အပန်းဖြေစရာပုံရိပ်ကမ္ဘာ.... စိတ်လက်ပေါ့ ပါးစရာအင်တာ...
Fifty million to one: Mother defies odds to give b...
You've got to be kidding! Herd of mountain goats c...
Wife attacks husband who came home without vodka
Nude stunt at Obama rally for RM3.1m
Khagendra officially named World's Shortest Man on...
Boy of three who weighs 10 STONE is banned from nu...
Varieties of colourful photos...
cookin largest omelette
One day, son, all this will be yours: North Korean...
The piglet that thinks it'sadog
Gourd almighty! The giant 1,600lb pumpkin that wei...
Clown wins Congressional election in Brazil ...
World famous imam with haemorrhoids exposes himsel...
RM5,000 fine, whipping for drinking beer